भत्ताको सास्ती ! | Hindu Khabar
भत्ताको सास्ती !
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–२ की ८२ वर्षीया सीता थिङलाई बोकेर वडा नम्बर १ खोलाखर्कतर्फ लगिँदै । तस्बिर : अन्नपुर्ण
काठमाडौं । सरकारले वृद्धवृद्धाको ‘सामाजिक सुरक्षा’का लागि भत्ता दिँदै आएको छ। समयानुकूल बढाउँदै पनि लगेको छ। तर, त्यही भत्ता लिन बैंक पुग्दा कतिपय बुवा–आमाले भोग्ने सास्ती भने देखेको छैन।
यस्तो कष्ट दिएर पनि ‘सामाजिक सुरक्षा’ हुन्छ र ?
गाउँपालिकाले बैंकलाई गाउँ–गाउँमा गएर भत्ता वितरण गर्न प्रस्ताव गरे पनि सम्भव नभएपछि यस्तो समस्या आएको अध्यक्ष राजकुमार मल्ल बताउँछन्।
कैलाश–२ की ८२ वर्षीया सीता थिङ हिँड्डुल गर्न सक्दिनन्। उनको जीवन निर्वाह वृद्धभत्ताबाटै भइरहेको छ। भत्ता लिन भने उनलाई बोकेर लैजानुपर्छ। ‘भत्ता लिँदाको दुःख सम्झिँदा त नजाऊँजस्तो लाग्छ’, कैलाश–१ स्थित खोलाखर्क झरेकी थिङले भनिन्, ‘पैलाभन्दा धेरै दुःख पायो। पैसा लिन आफैं जानुपर्ने तर हिँडेर जान सक्दिनँ।’
मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये कैलाश गाउँपालिकाले मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्र्छ। घुम्ती शिविर केन्द्रमा पुग्न पनि कतिपय गाउँबाट एक दिनसम्म हिँड्नुपर्छ।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने करिब १८ सय जना छन्। तर, बैंकमा आएर भत्ता लिने १० प्रतिशतजति पनि पुगेन’, गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तान भन्छन्।
जाजरकोटको छेडागाड–३ दशेराकी ८१ वर्षीया पानसरी थापालाई हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुन्छ। आँखाले ठिम्याउन सकस पर्छ। त्यसमाथि हस्ताक्षर गर्न जान्दिनन्। तर, वृद्धभत्ता लिन बैंकमै जानुपर्छ। बैंक गाउँमा छैन। आफन्तले उनलाई सात घण्टाको बाटो बोकेरै थलह बजार पुर्‍याए। बैंकमा भीड हुँदा उनले भत्ता लिन हैरानी भोग्नुपर्‍यो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर प्रकाशित छ ।